Somaliland: Kulanka Saamilayda Shirkadaha TELESOM GROUP oo ka dhacay Hargeysa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Kulanka Saamilayda Shirkadaha TELESOM GROUP oo ka dhacay Hargeysa
Waxa lagu qabtay maanta Magaalada Hargeysa xaflad ballaadhan oo ay isugu yimaadeen Saamilayda Shirkadaha Telesom Group, oo ka kooban Isgaadhsiinta Telesom, Baanka Daarasalaam, Shirkadda Gaaska Cuntada ee SOMGAS & shirkadda korontada ee TEC.
Ciise Maxamuud,oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi:- “Shirkadda Isgaadhsiinta waxa hoos yimaada saddex qaybood oo muhiim Adeegyada Maaliyada, qayb ka mid ah Korontada, Xawaaladda Zaad iyo isgaadhsiinta. Waxa ay ka hawlgashaa 349 xarumood oo wadanka oo dhan ah.”
“Technology isbeddel xoog leh ayay ku socotaa. shirkadduna arrintaasi iyada oo ka dhabaynaysa marwalba waxa uu keenaa isgaadhsiinta ugu dambeysa ee mujtamacu u baahan yihiin,” ayuu yidhi Ciise.
Saamilayda Shirkadaha TELESOM